Media sy Fanoratan-gazety · Oktobra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Oktobra, 2013
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Oktobra, 2013
Japana 07 Oktobra 2013
Fitaovana 06 Oktobra 2013
Mampiantrano failo media maherin'ny 18 tapitrisa izay azon'ny rehetra ampiasaina ny Wikimedia Commons. Io no toerana ahafahan'ireo mpampiasa manampy amin'ny fanaingoana ny Wikipedia sy ny tontolo manodidina azy ireo. Nefa araka ny hitan'ireo olona vaovao mandray anjara, mety ho fanamby ny fanakàrana ny tontolon'ireo zavatra azon'ny olon-drehetra ampiasaina sy mitondra fahalalana. Vao haingana izay dia namoaka boky kely iray vaovao manome torolàlana izy ireo ho fanampiana amin'ny fanamoràna ny fiaraha-miasa sy ny famatsiana votoaty.
Ny Iltyem-Iltyem, izay midika hoe "miteny amin'ny alalan'ny tànana" amin'ny teny Anmatyerr, dia tetikasa tariham-behivavy manangona lahatsary an-jatony avy any amin'ireo vondrom-piarahamonin-janatany, manangona ireo fiteny amin'ny alalan'ny tànana izay efa nampiasaina nandritra ny taranaka maro mba hifaneraserana lavitra, rehefa miafina na misy olona hafa miteny.
Amerika Latina 02 Oktobra 2013